Maalmahan, qof walba Dhulka yaqaano SMS, sidoo kale loo yaqaano fariimaha qoraalka. Waa mid ka mid ah hababka ugu fudud oo ugu da'da weyn ee diro fariimo gaaban ka badan shabakadda wireless. Sida qalab kasta oo kale ee elektaroonigga ah, taleefanada gacanta ayaa sidoo kale u nugul failure lama huraan ama waxaa kici laga yaabaa in qaar ka mid ah xaaladda aan loo baahnayn, kaas oo kiiska dib warshad waa khasab. Haddii ay sidaa tahay, wax walba oo kale fariimaha qoraalka ah, xiriirada, sawirada kuwa badbaadaya telefoonka laga yaabo in laga badiyay. Sidaas, waa mid aad u muhiim ah in ay sii gurmad ah wax kasta oo muhiim u ah in telefoonka ku jira. Intaas waxaa sii dheer, ka duwan files warbaahinta kale, SMS aan la badbaadin karaa kaarka SD dibadda. Sidaas, haddii aad iftiimiyo xasuusta telefoonka ama sameeyo dib warshad, dhamaan fariimaha waxaa lagu lumin doonaa.
Samsung, shirkadda South Korea, waa kii smartphone ugu weyn Android dunida dacaladeeda. In tutorial taas, waxaana idin tusin 3 hab oo ay u kaabta Samsung SMS si computer, daruur iyo telefoonka.
Qaybta 1. Sida loo kaabta Messages in Samsung iyo Save sida XML / TXT File ah Qeybta 2. kaabta Samsung SMS ah ee Free by Isticmaalka Samsung Kies Qaybta 3. Messages toos ah kaabta Samsung in Samsung Account Qaybta 4. Top 5 Android Apps la Sameeyo Samsung Message kaabta
Qaybta 1. Messages Sida loo kaabta in Samsung iyo Save sida XML / TXT File
Samsung Kies ilaa Taageeray iyo fariimaha badbaadiyay sida file message.sme ah, taas oo la aqrin iyo waxa loo isticmaali karaa oo kaliya in la soo celiyo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaad ka akhriso SMS ah oo hadda ka dibna si aad naftaada xusuusiso waxyaabaha muhiim dhejiyo. Si aad u samaysid iyada, waxaad isku dayi kartaa SMS gurmad software u Samsung - Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac . Waxaa aad u saamaxaaya in ay gurmad oo dhan ama fariimaha loo doortay in aad telefoon Samsung si fudud oo ku haboon. The version Mac ka shaqeeya ku dhawaad ​​la mid ah sida version Windows ma. Sidaas darteed, tutorial soo socda, waxaan kaliya qaadan version Windows sida isku day ah.
Tallaabada 1. Riix batoonka download inaad kala soo baxdo iyo gashato kombiyuutarka.
Tallaabada 2. waa Run iyo isticmaali cable USB ah in ay ku xidhmaan telefoonka Samsung in computer ka iyo in la hubiyo in si fiican loogu ogaan karaa.
Tallaabada 3. In uu furmo suuqa hoose, guji "dib Your Phone".
Tallaabada 4. Hubi noocyada file aad rabto in gurmad ay ka Samsung in kombiyuutarka, sida "fariimaha Text". Markaas riix "Start Copy" iyo fariimaha Samsung bilaabin la xoojiyaa.
Fiiro gaar ah: Waxaad sameyn kartaa meesha uu gurmad naftaada haddii aadan rabin default ka mid ah. Riix icon note ku saabsan dhinaca kore ee midig ee suuqa kala dooratid "Settings". Markaas dooran goobta oo guji "OK".
Qaybta 2. kaabta Samsung SMS ah ee Free by Isticmaalka Samsung Kies
Samsung Kies waa codsi la yaab leh horumariyo in ay ku xidhmaan telefoonada Samsung iyo kiniiniyada la computer socda Microsoft Windows ama nidaamka ka hawlgala Macintosh. Waxaa jira laba nooc oo Samsung Kies heli karo - Kies full version iyo version Kies mini . Version ayaa mini kaliya loo isticmaali karaa si loo casriyeeyo nidaamka qalliinka ee Qalabka telefoonada gacanta qaarkood Samsung ah. Samsung Kies waxaa loo isticmaali karaa si ay xog gurmad, xogta kala iibsiga, sifooyinka qalabka lagu iibsado ama jidiidin firmware qalab iyo version OS. Halkan waxaan ku tusi doonaa sida loo raad raac SMS in Samsung qalab mobile iyadoo la isticmaalayo Kies tallaabo version buuxa talaabo
Talaabada 1: Download iyo rakibi Kies. U hubso in aad kala soo bixi version saxda ah ee Kies in Samsung qalab mobile iyo nidaamka qalliinka PC ee ay taageertaa. Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan download, rakibi, cusboonaysiiso Samsung Kies >>
Talaabada 2: Isku qalab mobile Samsung in kombiyuutarka adigoo isticmaalaya cable USB ah. Waxaa laga yaabaa inaad aragto shaashadda ah sida hoos ku qoran ka dib markii isku xira qalab mobile Samsung kombiyuutarka.
Talaabada 3: Riix Back up / Restor e tab. Halkan waxa aad ku arki doonaa waxyaabaha liiska in aad awoodo gurmad ka qalab mobile Samsung.
Talaabada 4: Si gurmad SMS ka qalab mobile Samsung, guji checkbox ka Message ag guji kaabta. Fadlan eeg image hoose.
Talaabada 5: Sug ilaa Kies dhameeyo fariimaha qoraalka ah Samsung gurmad. Waxaad ka heli kartaa meesha uu gurmad hoose ee shaashadda. Marka gurmad waa guul shaashadda hoose ka muuqan doontaa:
Talaabada 6: Riix Waayahay . Taasi waa inaad sameyso si ay u qaataan raad raac ah oo aad SMS ka Samsung qalab mobile oo dhan.
Faa'iidodaro : Inkastoo Samsung Kies waa software aad wax ku ool, aad la kulmi karto dhibaatooyin la xidhiidha iyo gurmad SMS.
Qaybta 3. Samsung Messages toos ah kaabta in Samsung Account
Ka sokow, Samsung Kies, Samsung ayaa sidoo kale bixiyaan adeeg si aan kugu gurmad SMS oo dhan iyo xataa MMS ah ee aad taleefan Samsung in daruurtii si toos ah.
Tallaabada 1. aad Samsung telefoonka, tuubada Settings > Accounts oo hagaagsan .
2. Click Tallaabada dar xisaabta > account Samsung > saxiixdo email ah, password. Active xisaabta adigoo link ee aad email.
Tallaabada 3. Markaas, dib u tag phone Samsung oo xisaabtaada Samsung ka jaftaa oo ka jaftaa gurmad Device .
Tallaabada 4. Sax fursadaha kaabta iyo sax Messages (SMS) oo Messages (MMS) . Waxa kale oo aad sax karaa Log iyo Settings . Markaas, OK .
Tallaabada 5. dib u Tag gurmad Device iyo sax Auto gurmad si ha Samsung gurmad phone SMS iyo SMS si toos ah. Ama, waxaad isticmaali karaan Back ilaa hadda in ay gurmad Samsung SMS iyo SMS gacanta.
Fiiro gaar ah: Si aad u isticmaasho Samsung Auto gurmad, waxaad u baahan tahay shid network WiFi ah ee aad taleefan Samsung.
Qaybta 4. Top 5 Android Apps la Sameeyo kaabta Samsung Message
Kaabta SMS & Soo Celinta 4.6 Free 1.6m Android 1.5 iyo ilaa Ritesh Sahu
Kaabta SMS + 4.5 Free 1,010k 2.0 Android oo ilaa Jan Berkel
Super kaabta: SMS & Xiriirada 4.4 Free Kala duwan leh qalab Android 2.0.1 iyo ilaa Studio Idea Mobile
Kaabta SMS & Soo Celinta (KitKat) 4.3 Free Kala duwan leh qalab Kala duwan leh qalab INFOLIFE LLC
Kaabta SMS 4.1 Free 1.4m 2.3 TACOTY CN
1. SMS kaabta & Soo Celinta
Waa app ah mid aad u fudud in uu yahay awooda inay qaataan gurmad iyo sidoo kale soo celin karo SMS telefoonka ee. By default, gurmad la abuuray degaanka telefoonka. Waxa kale oo la qaybiyay kartaa in ay geliyaan si ay Google Drive, DropBox ama Email kale.
Fariimaha waxaa la xoojiyaa qaab XML kaas oo sidoo kale loo rogi karaa in qaab kale oo loo arki karo computer ah.
Awood u abuuraya jadwaliye ah gurmad automatic.
Awood u celin.
View dhamaan fariimaha ama wada hadalka la doortay.
Delete oo dhan fariimaha telefoonka
File kaabta sidoo kale loo soo diri karaa.
Ma u baahan tahay in la beddelo goobaha in gurmad wada hadal kaliya.
Download kaabta SMS & Soo Celinta ka Google Play Store >>
App An android si SMS gurmad, MMS oo wac si toos ah u gasho entries.
Samee gurmad adigoo isticmaalaya calaamad gaar ah ee Gmail ama Google Calendar.
Awood u soo celinta SMS una yeedha log entries.
Ma taageeri gurmad MMS.
Auto gurmad uusan si fiican u shaqeeyaan haddii lagu rakibay card SD dibadda.
3. Super kaabta: SMS & Xiriirada
Waa app ah mid aad u fudud oo fudud android in gurmad SMS iyo waxyaabo kale oo ku saabsan kaarka SD ama Gmail.
Arrintan oo uu weheliyo SMS, waxa kale gurmad barnaamijyadooda, xiriirada, wac log, Bookmarks iyo jadwalka.
Soo Celinta SMS, xiriirada, wac log, Bookmarks iyo jadwalka.
Delete xog gurmad kaarka SD ah
Kaabta lagu qaban karaa.
Ma awoodo in uu u hagaagsan la Google Drive.
4. SMS kaabta & Soo Celinta (KitKat)
Waa a app android Caawo ee gurmad SMS iyo soo celiyo.
Sidoo kale tirtiri kartaa SMS.
Eeebana wax ku biirtay badan. wada hadalka ee la mid ah dadka haysta lambarada telefoonka kala duwan.
Farriimaha soo socda ee Motorola Droid X / 2 telefoonka laga yaabo in aan la xoojiyaa.
Download kaabta SMS & Soo Celinta (KitKat) ka Google Play Store >>
Kaabta 5. SMS
Waa app a free android in ay awood u gurmad SMS in kaarka SD ama in ka E-mail gaarka loo leeyahay.
Eeebana wax gurmad ah oo loo soo celiyo labada.
Tirtiri karaa gurmad SMS kaarka SD ah.
Fariimaha ee kaabta la baari karaa xitaa haddii fariimaha lagu tirtiray card SD.
Soo celinta SMS xoojiyaa on Android version 4.4.2 ma shuqullada mararka qaarkood.
Download kaabta SMS ka Google Play Store >>
> Resource > Samsung > 3 Hababka loo sameeyo Samsung SMS kaabta Si fudud